Tsy misy fijanonana | Martech Zone
Tsy azo ijanonana
Wednesday, May 2, 2007 Alahady, Septambra 30, 2012 Douglas Karr
Tsy misy toa ny mandeha miasa sy mankeny amin'ny garazy andoavanao vola ary tsy misy fijanonana mijanona intsony! Nisy fihaonambe tao afovoan-tanàna androany ka nikorontana ny garazy ary nivarotra ireo toerana rehetra. Ka ny mpanjifa PAYING mahazatra rehetra dia tsy maintsy nandoa tany amin'ny garazy hafa na nanery tamina toerana hafa.
Nisafidy ny hamorona zavatra kely aho amin'ny asan'ny fijanonako - nijanona teo alohan'ny varavarana faha-6 aho! Raha voatarika aho dia tena hanapoaka ny sarony aho. Te hiditra maraina be aho hanao famerenana vokatra ary nandany 30 minitra nanandrana nijanona! Nihevitra ny mpiara-miasa amiko sy namako Emily fa mampihomehy dia naka sary tamin'ny fakantsary fakan-tsary izy:
Ratsy tokoa ny serivisy ho an'ny mpanjifa raha mikorontana amin'ireo mpanjifanao mandoa vola soloina solo-tokana!
Fanavaozana: Tsy notazomina aho, fa nisy olona nametraka naoty tsara teo amin'ny fitaratry ny fitaratra ka nahazoako fihomehezana, "TSY SPOTE PARKING IZAO, SADY!"
MacBookPro ao anaty Freezer
Mitady: Fitaovana fanombohana mailaka an-tserasera
May 2, 2007 ao amin'ny 4: 19 PM
Nampihoron-koditra ny fifamoivoizana androany maraina. Nony farany dia nitsambikina nivoaka avy tao anaty fiara aho, avy eo am-piasana mba hahafahan'ny vadiko manao fivoriana maraina. Ny garazy misy ahy dia tiako ny mivarotra ny tenany amin'izay fihaonambe rehetra ao an-tanàna. Toa anao, tsy azoko mihitsy hoe maninona ireo garazy fijanonana no tsy miraharaha ireo mpanjifany mahazatra mihoatra ny mpanjifa 1-fotoana.
May 2, 2007 ao amin'ny 10: 42 PM
Tsotra ny antony anaovan'izy ireo izany. Toy ny ankamaroan'ny fifandraisana manararaotra dia miverina hatrany ny mpanjifa mahazatra.
Mampalahelo fa mitranga foana ny zavatra toy izao, ny trano fisakafoanana sasany dia manome laharam-pahamehana ny fandefasana / fitsangatsanganana mifanohitra amin'ireo mpanjifany ao an-trano (Niandry adiny 2 aho noho izany).
Amin'ny maha mpanjifa antsika ny zavatra tokana azontsika atao dia ny mifidy amin'ny tongotsika ary ny hiteny momba izany. Kodiarana mitsitapitapy mahazo ny menaka.
Ny zavatra mampalahelo amin'ny toe-javatra garazy dia ny mahazatra azy ireo matetika (ny vidiny na ny toerana) mety indrindra ka ananan'izy ireo anao mihoatra ny barila.